Garowe: Dil toogasho oo lagu xukumay 3 ka mid ah raggii loo heystay kiiskii Caaisha Ilyaas
Garowe (Horumar Online) – Muddooyinkii dambe Maxkamadda Darajada Koowaad ee Magaalada Garowe ayaa waday dhageysiga rag loo haystay kiiska la xiriira Caa’isha Ilyaas Aadan oo lagu kufsaday Gaalkacyo, kadibna la dilay, ayaa Axadda maanta ugu dambeyn waxay maxkamadda soo saartay xukunka ragga arrintaasi lagu eedeyay.
Ragga kiiska Caaisha Ilyaas u xirnaa waxa ay gaarayeen illaa 10 rag, balse maxkamadda ayaa saddex ka mid ah ku riday xukun dil toogasho ah, halka todobada kalena maxkamadda ay sii daysay.
Saddexda eedaysane ee kala ah, Cabdifataax Cabdirahman Warsame, Cabdisalaan Cabdirahman Warsame iyo Cabdishakuur Maxamed Dige ayaa maanta maxkamadda waxa ay ku xukuntay dil toogasho ah.
Xukunka maxkamadda ayaa waxaa ku dhawaaqay Gudoomiyaha Maxkamada Darajada Koowaad ee Magaalada Garowe Sheekh Cabdinuur, kaasi oo sheegay in xukunsanayaasha racfaan ay ka qaadan karaan xukunka maxkamadda ay ku riday.
Si kastaba, Shacabweynaha Soomaaliyed ayaa si wayn indhaha ugu haayay nooca uu noqon doono xukunka ragga loo haysto falka Caaisha, balse dadka qaarkood & ehelada Caaisha ayaa si wayn u soo dhaweeyay xukunkaan.
Xafiiska Horumar Onlinle,
Tags: #Caaisha Ilyaas Aadan #Dil #Garowe #kufsi #xukun
Previous Post XOG CUSUB: Kenya oo sheegtay sababta ay duulimaadkii tooska ee Muqdisho iyo Nairobi u joojisay!
Next Post XOG HOOSE: Ma ogtahay hubka ay DFS ku dhabar-jebineyso Axmed Madoobe?